Hitsy toraka: Be fiavy ! | NewsMada
Mahavariana ny zava-misy iainan’ny fanatanjahantena malagasy, amin’izao fotoana izao. Miavaka tsy toy ny an’ny rehetra ny hitan’ny maso. Hafa kely mihitsy satria olona tsy nilomano tao anatin’ny fanatanjahantena no saika mitantana sy mitondra, ivelan’ny tontolo mihitsy.
Manao be fiavy tokoa izy ireo satria manosika azy hiditra ao anatin’izany fitantanana izany ny fananany vola fa tsy resaka fitiavana na faniriana hampivoatra. Aleo hiditra, hoy ny sasany, fa mila vola ny fampandehanana ny taranja. Tsy vitan’ny resabe fotsiny izany ny fitondrana federasiona na ligy fa mila vola. Tsy misy maharatsy izany, saingy lasa mametraka ny fahefany sy izay tiany ao anatin’ny ekipam-pirenena na amin’ny resaka teknika ireny mpanam-bola ireny.
Vokany, manaiky befahatany fotsiny ireo teknisianina sy ny mpanazatra na mahita aza fa tsy mety izany. Mahonena fa fisehosehoana ho mahavita amin’ny fanomezana vola kely ilay izy. Be fiavy ny filazany fa raha vao miala izy ireo, marary sy miala aina ny ekipa sy ny federasiona. Tsy mahagaga raha be fiavy koa ny faharesena sy ny tsy fahaizana.